Samsung Kies Air, ịkọrọ gị faịlụ n'etiti Samsung Smartphones na Computer
1 Họrọ Alternative
2 Họrọ 2,6
3 Họrọ 3
4 Họrọ Obere
6 Kies-adịghị arụ ọrụ
7 Kies maka PC
8 Kies maka Windows 7
8 Kies maka Windows 8
9 Kies maka Mac
10 Họrọ Download
11 Họrọ Driver
12 Họrọ Nyocha
13 Kies site Wi-Fi
14 Họrọ Update
15 Uninstall Họrọ
16 Họrọ ndabere
17 Họrọ Nyefee
Gịnị bụ Samsung Kies Air?
Kies Air, site Samsung bụ a wireless data transfer ngwaọrụ. Kies Air ka kama aghọ gharazie ịba uru ugbu a, dị ka App bụ agaghịkwa dị na Google Play Store ma ọ bụ Samsung ngwa ọdịnala ma ụfọdụ ọzọ weebụsaịtị ka nọrọ n'ụlọ apks na na na ntọlite ​​faịlụ chọrọ iji wụnye Kies Air. Kies Air e mere maka wireless nkwurịta okwu n'etiti Samsung ngwaọrụ na laptọọpụ ma ọ bụ na desktọọpụ kwere omume. Kies Air mere ka o kwe ngwaọrụ abụọ na otu netwọk jikọọ na-ekwurịta okwu site na ihe nchọgharị. Kies Air e mere dị naanị na ụfọdụ Samsung smart igwe nke bụ ya mere ntọlite ​​/ apks nwekwara wụnye naanị na họrọ ngwaọrụ. Ntọlite ​​nwere ike ibudata for free si ebe a.
Akwado ngwaọrụ: Samsung ngwaọrụ-agba ọsọ Android version 2.2 ka 4.1
Chọrọ Software: Samsung Kies Air APK
Olee otú ibudata na wụnye Kies Air na gị Samsung?
Jikọọ gị Samsung ngwaọrụ gị laptọọpụ ma ọ bụ na desktọọpụ site eriri USB.
Download Samsung Kies Air ngwa na iji njikọ nyere n'elu.
Nyefee ebudatara ngwa si gị na laptọọpụ ọ bụ nelu ihuenyo gị Samsung smart ekwentị.
Ịnyagharịa ekwentị gị nchekwa na ịchọta ndị Samsung Kies Air ngwa; enweta na ya iji wụnye ya na gị na Samsung ngwaọrụ.
Ngwa ga-ajụ maka ikikere na mgbe ị na-enye chọrọ ikikere Samsung Kies Air ga-arụnyere gị Samsung ngwaọrụ.
Olee otú iji Samsung kies
Dị ka a kọwara na mbụ, Samsung Kies Air, n'adịghị ka ndị ọzọ faịlụ ebufe software ọsọ kpọmkwem site nchọgharị nke a laptọọpụ ma ọ bụ na desktọọpụ na-ejikọ ngwaọrụ abụọ na otu netwọk. Iji malite iji Samsung Kies Air, na-eso ndị a dị mfe ntụziaka:
Na-agba ọsọ Samsung kies na gị Samsung smart ekwentị mgbe ọ na-jikọọ a na netwọk. Ọ ga-enye gị na esịtidem adreesị IP na ị chọrọ ịbanye Chọgharịa nke ọzọ na ngwaọrụ na i bu n'obi na jikọọ na gị Samsung smartphone.
Mepee nchọgharị gị laptọọpụ ma ọ bụ na desktọọpụ na Tinye adreesị IP nyere site Samsung Kies Air ngwa ke search mmanya na kụrụ Tinye.
A mmapụta elu ga-egosi na ekwentị gị na-arịọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ jikọọ gị na laptọọpụ ma ọ bụ nelu ihuenyo, enweta "Na" nọgide na.
A na ihuenyo yiri onye gosiri n'okpuru ga-apụta na ọmụma banyere ndị nile na data na ekwentị gị. Ị nwere ike ọ dịghị mirror ekwentị gị na ihuenyo na gị laptọọpụ ma ọ bụ nelu ihuenyo, ele foto, vidiyo, na kọntaktị na oku na ndekọ ozugbo.
Ajụjụ banyere Samsung Kies Air
Samsung Kies Air ekwu m mkpa Java ibudata multiple faịlụ ma m na-ama nwere Java 7 update 51
Nke a na nsogbu mgbe Java update 51 si eji bụghị e nyeere dị na nchọgharị. Idozi nke a:
Gaa nchọgharị gị si ntọala na ịnyagharịa ịchọta menu kpọrọ "nkwụnye ins". Pịgharịa gaa na chọta Java. Lee ma Java e nyeere, bụrụ na ọ bụghị, nwee ya.
Kies Air ozi-adịghị arụ ọrụ
Nke a na-mere ruru ka njehie n'ime kies sava na ọ dịghị ihe na-eme na ị gị Samsung ama ma ọ bụ gị na laptọọpụ ma ọ bụ na desktọọpụ. N'ụzọ dị mwute, a doro anya ngwọta nke nsogbu bụ adịghị, ma e nwere otu ezigbo ọzọ ugbu na-ahapụ gị ime ihe fọrọ otu ihe ma na-enweghị ihe ọ bụla njehie. Download MobileGo ntọlite ​​na kọmputa gị, Ozugbo download zuru ezu wụnye ya. N'elu launching ngwa ị ga-ahụ na Wondershare MobileGo nwere otu atụmatụ dị ka Samsung Kies Air na mgbakwunye na ụfọdụ n'ezie oké nkwalite ya. Ị nwere ike ugbu ozi na onye ọ bụla na-eji Wondershare MobileGo.
Ị nwere ike ijikwa mgbasa ozi na ekwentị gị na ọrụ dị ka download, mange, ibubata-mbupụ na mfe nzọụkwụ.
Ị nwere ike ijikwa mobile dị mkpa dị ka oyiri kọntaktị, mgba ọkụ ngwaọrụ, hapụụrụ ngwa, na nkwado ndabere-weghachi.
Ke adianade do, ọ agafewo ọrụ dị ka naghachi otutu data, nweta elu ikikere maka mma ngwaọrụ arụmọrụ.
4.262.817 ndị ebudatara ya
E wezụga izi ozi mma, Wondershare MobileGo nwekwara ọtụtụ na-akpali ọrụ dị ka ndabere, mirroring na otu click faịlụ transfer dị. Ọ na-atụmatụ ihe na-wuru Cleaner nke na-elekọta ebe nchekwa nke gị smart ekwentị. The akụkụ kasị mma bụ na Wondershare MobileGo na ọ bụghị nanị Samsung smartphone naanị; ọ bụ dakọtara na nta ọ bụla ama na-arụ ọrụ amamihe gafee ma windows na Mac ịwa usoro.
Kies Air Ngwa Egbochiri maka nchebe?
Nke a mkpọchi e mere site a Java update na-agụnye a akwụkwọ maka enwekwukwa nche. Idozi nke a:
1. Gaa Java akara ntọala na Pịa taabụ akara "Advance".
2. gbadaa na ịnyagharịa "Igosi Asambodo Nwepu Achọpụtazi" Lelee igbe na kwekọrọ na "adịghị ego" na pịa Mee.
3. Malitegharịa ekwentị nchọgharị gị na-abanye na URL nyere site kies ọzọ. Ọ ga-arịọ gị ọ bụrụ na ị na-n'aka na na ị chọrọ ịgba ọsọ ya, kụrụ ee.
<a href="http://polldaddy.com/poll/9034588/">Can Kies Air help you to transfer all files?</a>
Samsung Unroot Software na égwu
2 ụzọ ime Samsung Data Recovery I Nwere Ịmata
Samsung diski ike Data Recovery: Olee naghachi ehichapụ faịlụ site Samsung HHD
Samsung Kies Download maka Windows 7
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara Samsung Galaxy S5
3 Ụzọ Mee Samsung SMS ndabere Mfe
Samsung I5800 Kpọtụrụ Nyefee: Nyefee Ndi ana-akpo ka / si Samsung I5800 Mfe
Olee otú Wụnye Adobe Flash Player maka Samsung Galaxy
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si Samsung Galaxy Core
Nke bụ ụzọ kasị mma na-agbake ehichapụ ọdịnaya site Samsung ntị?
> Resource> Samsung> Samsung Kies Air, ịkọrọ gị faịlụ n'etiti Samsung Smartphones na Computer